राहेल ग्रीन र रस गेलर साँच्चै एक 'ब्रेक' मा थिए? साथीहरु को रोमान्स को अन्वेषण कि प्रशंसकहरु लाई सदाको लागी विभाजित गरीएको छ - पप संस्कृति
राहेल ग्रीन र रस गेलर साँच्चै एक 'ब्रेक' मा थिए? साथीहरु को रोमान्स को अन्वेषण कि प्रशंसकहरु लाई सदाको लागी विभाजित गरीएको छ
'फ्रेंड्स: द रियुनियन' ट्रेलर को रिलीज पछि, जुन २B मे मा HBO मैक्स मा प्रसारण हुने तयारीमा छ, '० को दशकको लोकप्रिय सिटकमका प्रशंसकहरुले सिटकॉमको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित बहसको समीक्षा गरे' रस र राहेल वास्तवमै एक थिए। ब्रेक? '
साथीहरु सेप्टेम्बर १ 1994 ४ देखि मई २००४ सम्म NBC मा प्रसारित। १० सिजन र २०० भन्दा बढी एपिसोड संग, शो संसारभरि एक ठूलो हिट भयो। आज को रूप मा, सबै उमेर को प्रशंसकहरु अत्यधिक २०२१ 'मित्र' पुनर्मिलन विशेष, जो सम्पूर्ण मूल कास्ट सुविधाहरु को आशमा छन्।
तपाइँ कसरी प्रेममा पर्नुहुन्छ?
राहेल र रस खेल्ने कलाकारहरु बहस मा बोल्छन्
शो समाप्त हुनु भन्दा पहिले, प्रशंसकहरु रस गेलर र राहेल ग्रीन को बीच सम्बन्ध मा विभाजित भए, र कि उनीहरु 'ब्रेक मा' थिए।
शो मा, दम्पती अस्थायी रूपमा विभाजित भयो, रस को लागी अर्को महिला संग घण्टा पछि सुत्न को लागी। जे होस्, राहेल दावी गर्छन् कि उनीहरु ब्रेक मा थिएनन्, जबकि रस दावी गर्छन् कि उनीहरु थिए।
बहसले संसारभरिका प्रशंसकहरु बीच चर्को बहस शुरू गर्यो, जसको बहुमत 'टीम राहेल' मा थियो।
५४ वर्षीय डेभिड श्विमर र ५२ वर्षकी जेनिफर एनिस्टन हुन्। डेभिड र जेनिफर दुवैले कहिल्यै सीधा जवाफ दिएनन् कि उनीहरु को टोलीमा थिए, तथापि, पुनर्मिलन ट्रेलरले प्रशंसकहरुलाई केहि बन्द गरायो।
ट्रेलर मा लगभग 44 सेकेन्ड, होस्ट जेम्स Corden जेनिफर सोध्नुभयो,
'रस र राहेल ब्रेक मा थिए?'
जसको लागी अभिनेत्रीले जवाफ दिईन्:
म्याट LeBlanc, जो जोई Tribbiani खेले, संग interjects:
२०२० मा, डेभिड Schwimmer अतिथि 'आज राती शो जिमी Fallon अभिनीत' मा अभिनय र उमेर-पुरानो प्रश्न सोधिएको थियो। जसको जवाफ उनले दिए:
एक मायालु को लागी कविता बित्यो
'यो एउटा प्रश्न पनि होइन, उनीहरु ब्रेकमा थिए।'
प्रशंसक राहेल ग्रीन र रस गेलर मा बहस
प्रिय कमेडी को प्रशंसक लगभग दुई दशक को लागी प्रश्न मा बहस गरेका छन्। जब HBO मैक्सले ट्विटर मा पुनर्मिलन को घोषणा गरे, प्रशंसकहरु लाई अझै पनी हास्यपूर्ण ब्रेक को बारे मा टिप्पणी गर्न को लागी, आफ्नो राय जोडेर। तिनीहरूले भने:
एक जहाँ हामी पत्ता लगाउँछौं कि उनीहरु वास्तव मा एक ब्रेक मा थिए।
संकेत उनी हुक अप भन्दा बढी चाहन्छन्
- मनोरन्जन आज रात (nowetnow) मई १,, २०२१
उनी उनी माथि थिइन्? उनी कहिले उनको अधीनमा थिए?
- रेशम (@denizligunler) मई १,, २०२१
हामी ब्रेक मा थियौं #FriendsReunion pic.twitter.com/pW4hRaf6sP
- नेटली (@IAmTrouble76) मई १,, २०२१
१ pages पृष्ठ अगाडि र पछाडि LOL तिनीहरूलाई माया गर्नुहोस्
- दुर्लभ सौन्दर्य SG3ISCOMING की रानी (atkatdelunanatti) मई १,, २०२१
के रस र राहेल ब्रेक मा थिए?
जोए: #FriendsReunion pic.twitter.com/hqukOWMuiO
- jc (ohjohnchrisbuen) 20 मई, 2021
म त्यो दिन को लागी पर्खिरहेको छु जब कोहि 'रस र राहेल एक ब्रेक मा थिए' र अर्को व्यक्ति जस्तै 'म उनीहरुलाई चिन्दिन'
- Cuthbert (uthCuthbertato) मई १,, २०२१
एपिसोडमा पुग्यो जहाँ रस र राहेल छुट्टिए: (((इमो घण्टा चाँडै शुरू भयो
- पूर्व (veevelyngxselle) 25 मई, 2021
म पर्खन सक्दिन, र म सहमत छु कि रस र राहेल एक ब्रेक मा थिए https://t.co/Jh75wkrNJM
- अनास्तासिया Beaverhausen (weetSweet__Ty) मई १,, २०२१
के म यो ब्लड मून लाई पकड्न को लागी बिहान ४ बजे को लागी मेरो अलार्म सेट गर्दैछु?
मेरो मतलब .... रस र राहेल एक ब्रेक मा थिए?!
- एलिसा फिलिप्स (lyElyssaMP) 25 मई, 2021
मेरो आखा। मेरो आखा
र विश्वास गर्न सक्दैनौं कि हामी अझै सहमत छैनौं तर रस र राहेल एक ब्रेक मा थिएनन्। उनीहरुको झगडा भयो! (टीम राहेल सधैं) https://t.co/KYqCDotALQ
ट्रे स्मिथ स्मिथ छोरा हुनेछन्
- मोहर बसु (मोहरबासु) मई १,, २०२१
जे होस् राहेल र रस को भूमिका निभाउने कलाकारहरु दुबै सहमत थिए कि दुबै एक ब्रेक मा थिए, आधा भन्दा बढी प्रशंसकहरु असहमत थिए, र ट्रेलर मा जेनिफर को जवाफ बाट धेरै परेशान थिए।
पुनर्मिलन धेरै अतिथि ताराहरु संग योजना बनाईएको छ, र 'द लेट नाइट शो' होस्ट जेम्स Corden द्वारा होस्ट गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: 'मँ मिडिया बाट थकित छु': लोगन पॉल कछुवालाई उनी र भाइ जेक पॉल को बिरुद्ध प्रतिक्रिया ड्राइविंग को प्रतिक्रिया
म किन धेरै चुस्छु
एक स्वार्थी पति संग कसरी व्यवहार गर्ने
जब तपाइँ एक विवाहित पुरुष संग मायामा हुनुहुन्छ
पहिलो डेट पछि अनलाइन डेटि rules नियम
१० रमाईलो चीजहरु जब तपाइँ बोर हुनुहुन्छ